आर्थिक वर्षको सुरुमै सरकार ऋण खोज्दै ! - Samajik Patra
आइतवार, कार्तिक ९ गते २०७७
आर्थिक वर्षको सुरुमै सरकार ऋण खोज्दै !
कोरोना महामारीले राजस्व आम्दानी घटेको बेला पर्वको महिना असोजमा ठुलो खर्च भएपछि सरकारको नगद रित्तिएको छ।
राजस्वसहितको नगद पुरै सकिएपछि सरकार वर्षको सुरुमै आन्तरिक ऋण लिन बाध्य भएको खबर आजको नागरिक दैनिकमा बालकृष्ण ज्ञवालीले लेखेका छन्।
गत वर्ष तेस्रो चौमासिक तिर मात्र ऋण उठाइएको थियो। भदौ मसान्तसम्म राजस्वसहितको आम्दानी १ खर्ब १६ अर्ब र खर्च ७० अर्ब भएकाले सरकार ४६ अर्ब रुपैयाँ नगद बचतमा थियो।
तर, असोजका २३ दिनमै थप ९५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएपछि सरकारको नगद पुरै रित्तिएको हो। असोज २३ मा आइपुग्दा राजस्वसहितको कुल आम्दानी एक खर्ब ६५ अर्ब ७२ करोड भएको छ भने खर्च एक खर्व ६५ अर्ब ८३ करोड हुन पुगेको छ।
आर्थिक वर्षका १२ महिनामध्ये सबैभन्दा बढी चालु खर्च हुने असोजमा हो। निजामती, शिक्षक, सुरक्षाकर्मीलगायतका सबै कर्मचारी र पेन्सन पाउने पूर्व कर्मचारीलाई असोजमा दुई महिना बराबरको तलब सुविधा दिनुपर्छ।
यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पहिलो किस्ता पनि यही महिनामा वितरण गरिन्छ। गत वर्षकोे पुँजीगत खर्चको बाँकी भुक्तानी सकेसम्म यही बेला दिने गरी तालिका बनाइन्छ।
एकै महिनामा धेरै किसिमका खर्च व्यहोर्नु पर्ने तर, त्यही अनुसार राजस्व संकलन नहुने भए पछि सरकारलाई नगद व्यवस्थापनमा दवाव परेको हो। असोज १५ पछि चालु खर्च मात्र दैनिक औषतमा ५ अर्ब भन्दा बढी भइरहेको छ। राजस्व भने औषतमा दुई अर्ब मात्र छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले सरकारले पहिलो चौमासिकबाटै आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘अहिलेसम्म आन्तरिक ऋणबापत ३० अर्ब रूपैयाँ उठाइएको छ। कातिकभित्र ५७ अर्ब रूपैयाँ पु¥याउने तालिका बनाइएको छ।’
राज्यको ढुकुटीमा ब्रम्हलुट : चिया-नास्तामै २० अर्ब खर्च
आइतवार, आश्विन २५ २०७७०७:३१:४७
साँसद खड्का दम्पत्तीलाई कोरोना संक्रमण
यस्तो छ नेपाल टेलिकमले ल्याएको दशैँ-तिहार विशेष अफर
बढ्न थाले जलविद्युत् कम्पनीका सेयर मूल्य
प्रभु बैंकको ब्राण्ड एम्बासडरमा कलाकार प्रदिप र कृष्टिना
१५ कम्पनीको आईपीओ आउँदै